Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Brunei » Nahazo ny tifitra vaksiny COVID-19 voalohany i Sultan of Brunei
Nahazo tifitra vaksiny COVID-19 voalohany i Sultan of Brunei, natomboka ny fampielezan-kevitra nasionaly
Taorian'ny fanindronana fatra voalohany, nanaiky ny hanombohana ny programa vaksinim-pirenena COVID-19 ny sultan
Hanomboka rahampitso ny programa vaksinim-pirenena COVID-19 any Brunei
Nanomboka ny volana aogositra 2020, Brunei dia nanomana ny fampiharana ny programa vaksininy
Nanome alalana manokana i Brunei ho an'ny vaksinin'ny COVID-19 telo hampiasaina ao amin'ny firenena
Brunei's Minisitry ny fahasalamana nanambara fa ny Sultan of Brunei dia nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksinin'ny COVID-19, satria efa miomana amin'ny famoahana ny programa vaksinim-pirenena manomboka ny rahampitso ny firenena.
Raha ny filazan'ny minisitera dia nahazo ny fatra fanindronana vaksiny COVID-19 voalohany i Sultan Haji Hassanal Bolkiah tao amin'ny lapan'ny mpanjaka Istana Nurul Iman. Taorian'ny fanindronana fatra voalohany, nanaiky ny hanome ny fizotran'ny vaksinim-pirenena ho an'ny besinimaro ny sultan.
Nanomboka ny volana aogositra 2020 dia nanomana fanomanana ny fampiharana ny programa fanaovana vaksiny ao Brunei i Brunei. Nanangana komity teknika vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 ny firenena handinihana sy handinihana ary hanombanana ireo vaksinin'ny COVID-19 hita eny an-tsena mba hiantohana fa azo antoka sy mahomby ary manana kalitao ireo vaksinina ampiasaina ao amin'ny firenena.
Miorina amin'ny fikarohana sy fanombanana amin'ny antsipiriany, Brunei dia nanome alalana manokana ho an'ny vaksinin'ny COVID-19 telo hampiasaina ao amin'ny firenena, dia ny vaksinin'ny Oxford-AstraZeneca COVID-19, vaksinin'ny Pfizer-BioNTech COVID-19 ary vaksinin'ny Sinopharm COVID-19.
Nilaza ny minisiteran'ny fahasalamana fa ity fanomezan-dàlana manokana ity, izay antsoina ihany koa hoe Autorisation d'exploitation, dia ho an'ny fisorohana ny aretina COVID-19 mandritra ny vonjy taitra ara-pahasalamam-bahoaka na ny areti-mifindra. kaonty ny fanamafisana lehibe amin'ny fepetra fiarovana, fahombiazana ary kalitao.